Baraha taageera ururka alshabaab ayaa lagu sheegay magaca ninkii isku qarxiyey Hotelka Ambassador – STAR FM SOMALIA
Ururka Alshabaab ayaa ku shaaciyay baraha internetka ee taageera magaca qofkii ka dambeeyay qaraxii lagu weeraray hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho.
Ninka waday gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay oo isku qarxiyay Hotel Ambassador ayay Alshabaab ku sheegtay in uu ahaa Bishaar Cumar Aadan oo (Abuu Layth) ku magac dheeraa.
“Bishaar waxa uu muddo dheer ka mid ahaa xarakada Alshabaab isagoo tababaro ku soo qaatay dalka, wuxuuna ahaa sheekh heer sare ka gaaray barashada cilmiga sharciga ah iyo midka maadiga.”ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka Alshabaab oo sheegtay in ay ka dambeysay weerarkii lagu qaaday Hotel Ambassador.
Idaacada Andulus ee ku hadasha Afka Al-Shabaab ayaa wareysatay ninkan isku qarxiyay Hotelka Ambassador kahor inta uusan weerarka fulin, waxa uuna sheegay in uu ku qanacsanyahay weerarka is qarxinta ah uu fulinayay.
Weerarkii isqarxinta iyo iska horimaad saacado badan socday gudaha Hotelka Ambassador ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan, inkastoo tirada rasmiga ee ku dhimatay aan si sax loo heyn, balse waxaa lagu qiyaasay dhimashada inay labaatameeyo gaareyso, waxaana ka mid ahaa dadka ku dhintey weerarkan labo xildhibaan oo ka mid ahaa mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliyeed.
Alshabaab ayaa hore waxa ay weeraro is qarxin ah ugu qaaday Hotelo ku yaal magaalada Muqdisho sida hotel Jazeera,Saxafi,Central,Maka Al Mukarammah,SYL,Lido iyo qaar kale.